मधुमेहले यी ६ अंगलाई सबैभन्दा पहिला खराब गर्छ !! | सुदुरपश्चिम खबर
मधुमेहले यी ६ अंगलाई सबैभन्दा पहिला खराब गर्छ !!
टाइप टु मधुमेहलाई नियन्त्रण गरिएन भने तपाईंको मुखको स्वास्थ्य पनि खराब हुन्छ । यो स्थितिमा तपाईंका ती रक्त कोसिकामा क्षती पुग्छ जसका कारण तपाईंको दाँत र गिजामा समस्या देखिन्छ । यसले दाँत र गिजाको संक्रमण बढाउँछ । त्यसैले तपाईंले आफ्नो मुखलाई सधैभरी सफा सुग्घर राख्नुहोस् । रातोपाटी बाट सभार
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * + 59 = 64